Sida Loolashaqeeyo «Shaashad Shaashad ah» | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyadda «Triple Screen» iyo tilmaame cusub oo vfxAlert ah «Isbeddello»
Ganacsiga isbeddelka ayaa weli ah ikhtiyaarka ugu fiican ee sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah . Ganacsigu wuxuu noqon doonaa mid la isku halleyn karo marka isbeddelka hal jiho uu ka muuqdo dhowr jadwal. Tilmaamaha "Isbeddellada" ee barnaamijka vfxAlert ayaa kaa caawin doona inaad si dhakhso leh u qiimeyso xaaladda oo aad u hesho xilligan xulasho.
Istaraatijiyadda «Triple Screen» oo uu qoray Alexander Elder
Istaraatiijiyad caadi ah oo adeegsata macluumaadka laga soo bilaabo saddex waqti oo lagu furayo ganacsi: "yar", "dhexdhexaad" iyo "dheer".
Aan ka yarayn 70-75%
Sida uu sheegayo qoraaga, waqti kasta oo ku xiga waa inuu ugu yaraan 5 jeer ka weynaadaa kii hore. Tani waxay si fiican uga shaqeysaa suuqa saamiyada, ee Forex oo leh isbeddelkeeda sare, xilliyo "dheer" aad u badan ayaa seegi kara calaamado badan oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo dhab ah oo wanaagsan. Xulashooyinka muddada-gaaban ee lammaanaha waaweyn ee lacagta ah, isku-darka "M1-M5-M15" ayaa ku habboon.
Mabda'a waa fududahay: fur ikhtiyaarka M1 marka isbeddelka dhammaan saddexda wakhti uu isku mid yahay. Jaantusku wuxuu muujinayaa tusaale ah xulashada 'PUT-option'. Hoos u dhaca ayaa muuqda. Si aanan si joogto ah ugu beddelin shaashadaha, waxaan adeegsan doonnaa tilmaamaha «Isbeddellada», oo muujinaya xoogga isbeddelka marka lagu daro jihada.
Waxaan had iyo jeer ku bilaabaynaa gorfaynta waqtiga go'an ee sareeya (M15), ka dibna u gudubno celceliska (M5), haddii ay isku soo beegmaan, waxaad furan kartaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh dhicitaankiisa 5-10 daqiiqo.
Shaandhaynta dheeriga ah ee calaamadaha been abuurka ah ee ganacsiga, waxaan u adeegsanaa 'Stochastic' - oscillatorku wuxuu qiimeyn doonaa isku dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaaliyaha ka sarreeya heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaaf), ka hooseeya 20 - dhamaadka hoos u dhaca ( xad dhaaf)
Kici (CALL) ikhtiyaarka. Dib u habeynta dhammaan waqtiyada (M1-M5-M15) iyo calaamadda vfxAlert. Stochastic waxay ka sarreysaa heerarka eber ama aagga la iibsaday.
FALL (PUT) option . Xaaladaha ka soo horjeeda: hoos u dhaca dhammaan jadwalka waqtiga (M1-M5-M15) iyo calaamadda vfxAlert. Stochastic sidoo kale waxay hoos ugu sii socotaa in la iibiyo.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 7-10 daqiiqadood xitaa haddii waqti cayiman la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Soo koob ha la. Istaraatiijiyadda intraday «Triple Screen» waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah muxaafid xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada 'Stochastic' waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!